Vehivavy mitondra vohoka : mahafaty ny fahaverezan-dra sy ny fiakaran’ny tosidra (NewsMada) | AEMW
Vehivavy mitondra vohoka : mahafaty ny fahaverezan-dra sy ny fiakaran’ny tosidra (NewsMada)
Antony telo mety hitarika fahafatesan’ny reny, mandritra ny fitondrana vohoka na eo am-piterahana, ny fahaverezan-dra be loatra, ny mikraoba mahazo ny taovam-pananahana ary ny fiakaran’ny tosidra ambony mandritra ny vohoka, araka ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanan’ny mpitsabo manokana momba ny fikarakarana ny vehivavy (collège malgache des gynécologues obtétriciens -Comago), Randaoharison Pierana Gabriel, omaly teny Ankorondrano. Araka ny antontanisa farany, vehivavy 10 isan’andro ny mamoy ny ainy mandritra ny fitondrana vohoka na eo am-piterahana ary matetika, tsy manaraka ny vohoka eny amin’ny toeram-pitsaboana sy ny hopitaly izy ireny fa manatona renin-jaza ka sarotra ny fandraisana an-tanana rehefa miseho ny loza. Ho an’ny zaza teraka 100 000, reny 478 no maty ka tanjona ny hampihena izany ho 300, araka ny fanadihadiana momba ny fahasalamana 2012-2013. Azo sorohina tsara anefa ny fahasarotana eo am-piterahana raha misafo inefatra eny amin’ny mpiasan’ny fahasalamana nahazo fiofanana ny reny rehetra. « Mety hitarika amin’ny fahafatesana ny fahataran’ny fandraisana an-tanana », hoy ny profesora Rakotovao Hery.
Tratran’ny mikraoba avokoa ny 40%-n’ny vehivavy manatona mpitsabo
Ankoatra ny fahaverezan-dra sy fiakaran’ny tosidra, aretina mpahazo ny vehivavy koa ny fidiran’ny mikraoba amin’ny taovam-pananahana aorian’ny fiterahana. « Amin’ny ankapobeny, 40%-n’ny vehivavy tonga manatona ny sampandraharaha manokana misahana ny fitsaboana ny taovam-pananahana (gynecologie), tratran’io tranga io avokoa », hoy ny dokotera Randriamboavonjy, lehiben’ny sampana gynécolgie et obstetrique ao amin’ny Cenhosoa, Soavinandriana. Tsy voatery ho avy niteraka akory izy ireo fa ny vehivavy ( na tovovavy) rehetra efa miditra amin’ny firaisana ara-nofo, mety ho voan’ny mikraoba ny taovam-pananahany. Ilaina ny fanatonana mpitsabo manokana indroa isan-taona hitiliana ny mikraoba na tsy mahatsapa zavatra hafahafa aza ilay vehivavy, isorohana ny homamiadana.
60 ny mpitsabo manokana ny vehivavy miasa amin’izao fotoana izao ary saika hita eto an-dRenivohitra sy ny amin’ny renivohi-paritany ny ankamaroany. Notanterahina mandritra ny roa andro( andiany faha-IX) ny fihaonana eo amin’ireo mpitsabo manokana momba ny taovam-pananahan’ny vehivavy, sy ireo mitondra vohoka. Nosafidina ny lohahevitra manodidina ny « Tranga hamehana ilana fitsaboana maika eo amin’ny vehivavy mitondra vohoka ». Fanao isan-taona ny fivoriana hizarana traikefa eo amin’ny samy mpitsabo manokana.
← « The revival 2 » : rindran-kira ho famohazam-panahy (NewsMada)
Faritra Vakinankaratra : tsy ampy betsaka ny tolotra vokatra ronono (NewsMada) →